अहिले दुग्ध विकास संस्थान सुधारका लागि भावी योजनाहरु के के छन् ? » aarthikplus
अहिले दुग्ध विकास संस्थान सुधारका लागि भावी योजनाहरु के के छन् ?
वि.सं.२०७८ असोज १० आइतवार २१:२०
किसानहरुबाट दूध संङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गरेर नयाँ बस्तुहरु उत्पादन गर्ने तथा ती उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्ने कामना संलग्न रहँदै आएको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सरकारी निकाय हो दुग्ध विकास संस्थान् । कोरोना भाइरसको महामारीको बाबजुद पनि दुग्ध पदार्थको संकलन तथा विक्रि वितरणमा संस्थानलाई थप बलियो बनाएर लैजाने अभियानमा संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल लाग्नुभएको छ ।
दुग्ध पदार्थको विविधिकरण गर्दै संस्थानलाई आर्थिक सक्षमता प्रदान गर्ने र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको गुणस्तरियताका मापदण्ड अनुसार दुग्ध सामाग्री उत्पादन गरी बजारमा पठाउने कुराकानीको क्रममा बताउनुभयो । पछिल्लो समय दुग्ध विकास संस्थानको अवस्था, कोरोनाले पारेको प्रभाव र भावी योजनाका विषयमा अपटुडेट साप्ताहिकले गरेको कुराकानी :
अहिले दुग्ध विकास संस्थान के गरिरहेको छ ?
दुग्ध विकास संस्थान पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो । सेवा र व्यापार दुबै यसको दायित्व भित्र पर्छन् । दुध उत्पादक किसानहरुबाट दुध खरिद गर्ने, प्रशोधन गर्ने, विविधिकरण गर्ने र उपभोक्ता माझ पुर्‍याउने यसको मुलभुत काम हुन् ।
वित्तिय स्वास्थ्यको कुरा गर्दा दुग्ध विकास संस्थान धेरै नाफामा पनि गएको छैन । यो खर्च र आम्दानी बराबरी जस्तोमा ९बिइपी० चल्दै आएको छ । कुनै बर्ष ५–७ करोड नाफा पनि हुन्छ, कुनै बर्ष त्यो पनि हुदैन । खर्च मात्रै धान्ने अवस्था हुन्छ । त्यो भएकोले यस संस्था धेरै नाफा गएको छ, धेरै गरेका छौ भनेर हामी फुर्ति लगाउँदैनौ । चालु आर्थिक बर्षमै पनि कोरोनाको कारण धेरै प्रोडक्टहरु स्टकमा छन् । त्यो मुल्याङकन गर्दा एक अर्ब भन्दा बढीको स्टक भएको प्रडक्टहरु छन् । जस्तो धुलो दुध, बटर, नौनी, चीजहरु याक चीज, घिउहरु लगायत प्रडक्टहरु स्टक छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले किसानलाई भुक्तानी दिन स्टक बढी छ, बिक्रि कम छ । त्यसले गर्दा किसानलाई हामीले नियमित रुपमा समयमा भुक्तानी दिन पनि सकिरहेको छैनौ । जति जति विक्रि बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति सहज हामीलाई हुन्छ । त्यति नै हामी किसानलाई भुक्तानी दिँदै जाने अवस्था छ ।
कोरोना भाइरसले बजारलाई ठुलो नोक्सान ग¥यो यसबाट डिडिसी कत्तिको प्रभावित बन्न पुग्यो ?
किसानहरुबाट संकलन भएको दूधलाई बजारीकरण गर्ने कार्य वि।स। २०७६ चैतमा आह्वान गरिएको लकडानपश्चात् हालसम्म पनि निकै कठिन हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म पनि शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन, होटल, रेष्टुरेन्ट एवं पार्टी प्यालेस लगायत विभिन्न उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा सुचारु हुन नसकेको कारण यसवाट एकातिर दुग्ध उत्पादन किसानहरुलाई समस्या सृजना भएको छ भने अर्कोतिर दुधको व्यवस्थापन कार्य समेत जटिल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरुलाई दूधको उपयोग बढाउन प्रेरित गर्ने किसिमको प्रर्वधनात्मक नयाँ कार्यक्रहरु ल्याउनु जरुरी छ ।
संस्थानद्वारा दैनिक रुपमा कति संकलन र कति विक्रि वितरण गरिरहेको छ ?
अहिले दुग्ध विकास संस्थानले दैनिक रुपमा करिब ८० हजार लिटर दुध संंकलन गर्दै आएको छ । यसलाई बढाएर दैनिक ९० हजार देखि १ लाख लिटर सम्म पु¥याउने योजना बमोजिम संस्थानले आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाईरहेको छ । विगतमा दैनिक १ लाख ३० हजार लिटरसम्म पनि दुध संकलन गदैृ आएको संस्थानले हाल दुधको संकलन दर घट्नुमा बजारमा स्थापना भएका नयाँ डेरी उद्योगबाट सृजना भएको प्रतिष्पर्धाले पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
संस्थानद्वारा उत्पादिन तथा वितरित दुग्ध पदार्थको गुणस्तरियतामा कहिलेकाँही प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?
प्रतिस्पर्धी बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनले नै उपभोक्ताहरुको मन जित्न सक्छन् । सोही बमोजिम संस्थानले पनि नँया नयाँ कार्यहरु ल्याईरहेको छ । जसअन्तरगत आगामी दिनमा संस्थानले आफ्ना उत्पादनहरुलाई परिकृष्त गर्दै लैजाने र औद्यौगिक उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुने योजना तय गरेको छ । नयाँ प्रविधिलाई समेत आत्मसात् गर्न सकेको खण्डमा कम लागतमा बढी गुणस्तरिय उत्पादन गर्न सफल हुन सकिन्छ ।
दुग्ध उत्पादक कृषकको क्षमता अभिवृद्धिका के कस्ता योजनाहरु अगाडि सार्नुभएको छ ?
नेपालमा अहिलेसम्म साना दुग्ध उत्पादक किसानहरुको भरमा दूध बजार थेगिरहेको छ । देशभरीका सबै दुध उत्पादक किसानहरुलाई नेपालमा सञ्चालनमा रहेका डेरी उद्योगहरुले अझै पनि समेट्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा कम उत्पादन गर्ने अधिकांश पहाडी क्षेत्रका घरायसी किसानले उत्पादन गरेको दुध आफैले मात्र प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । साथै उक्त दुध नोक्सान हुने स्थिति समेत छ । यसलाई विचार गर्दै आगामी दिनमा दुध उत्पादनको लागि किसानको क्षमता अभिवृद्धि र संकलन केन्द्र विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । जसबाट किसानलाई ठुलो क्षमतामा दुध उत्पादन गर्न र आफूले उत्पादन गरेको दुधबाट राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त हुने मनसायले दुग्ध जार विस्तारमा जुटेका छौं । यसबाट एकातिर किसानको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन सक्छ भने अर्कोतिर उद्योगहरुले समेत आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि गरी नयाँ औद्योगिक उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुन सक्छन् ।
संस्थान सुधारका लागि भावी योजनाहरु के के छन् ?
पछिल्लो दिनहरुमा दुधको माग अन्य उत्पादनहरु जस्तो कोकाकोला, फान्टा, पेप्सी लगायतले लिन लागेको अवस्थामा दुधको उपयोग बढाउनको लागि दुग्ध उद्योगहरुले नयाँ योजना तथा उत्पादनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी छ । सोही बमोजिम अहिले डिडिसीले पनि आफ्ना उत्पादनमा विविधिकरण गर्ने र दायरा बढाउँदै गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ आम उपभोक्तासामू पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यसले दुग्ध विकास संस्थानको आर्थिक स्थिति बलियो हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
TFF MINI SUMMIT 2021 in Nepal
विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप भित्र्याउन सके...
काठमाडाैँ । गैर आवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०को महाधिवेश अक्टोबर...